Teny tsiky 35 izay hitsikitsiky hatramin'ny sofina - Quotes
Ny tsiky amin'ny tarehin'olona dia zavatra tsara jerena.
Ny tsiky eo amin'ny tavanao dia zavatra mahafinaritra mahatsapa.
Izany no antony niarahanay nanangona fanangonana izay tena tsara indrindra tsikitsiky mitsiky manodidina.
Isaky ny tsy mitsiky ianao dia misy fotoana ahafahana manao izany. Vakio fotsiny ny sasany amin'ireto teny nindramina ireto ary jereo raha mitsiky ny tarehinao.
Noho ny tsikinao, dia ataonao lasa tsara tarehy kokoa ny fiainana. - Thich Nhat Hanh
Ny tsiky dia fahasambarana ho hitanao eo ambanin'ny oronao. - Tom Wilson
Mitsiky toy ny voninkazo aho tsy amin'ny molotro ihany fa amin'ny tenako iray manontolo. - Rumi
Rehefa mianatra mitsiky amin'ny fiainana isika, dia ho hitantsika fa mivaha ny olana sendra antsika. - Donald Curtis
Andao hihaona amin'ny tsiky foana isika, satria ny tsiky no fiandohan'ny fitiavana. - Reny Teresa
Mitsikia, mitsikia, mitsiky matetika ao an-tsainao araka izay azo atao. Ny fitsikinao dia hampihena be ny fihenjanana manimba ny sainao. - Sri Chinmoy
Ny fiainana dia toy ny fitaratra, mahazo ny vokatra tsara indrindra isika rehefa mitsiky amin'izany. - Tsy fantatra
Alohan'ny hametahana ny volonao dia alao antoka tsara fa tsy misy tsiky azo. - Jim Beggs
famantarana fa te hiverina aminao ny taloha
Raha sasatry ny manome tsiky anao ny olona iray dia avelao ny anao manokana, satria tsy misy mila tsiky toy ireo izay tsy manana hanome. - Samson Raphael Hirsch
Tsiky iray manasitrana ny faharatran'ny volom-bolo. - William Shakespeare
Ho hitanao fa mbola mendrika ny fiainana, raha mitsiky fotsiny ianao. - Charlie Chaplin
Mitsikia hatrany, satria zavatra mahafinaritra ny fiainana ary be ny mitsiky. - Marilyn Monroe
Ny atao hoe tara-masoandro amin'ny voninkazo, ny tsiky dia an'ny zanak'olombelona. Tsy misy dikany ireo, azo antoka fa miparitaka amin'ny làlan'ny fiainana, ny soa ataon'izy ireo dia tsy takatry ny saina. - Joseph Addison
Ny tsiky dia miolakolaka izay mahitsy ny zava-drehetra. - Phyllis Diller
Androany, omeo vahiny iray ny tsikinao. Mety ho izy irery ilay masoandro hitany tontolo andro. - H. Jackson Brown Jr.
Fanononana 40 momba ny fiposahan'ny masoandro hanome aingam-panahy, hanentanana ary hanavao ny fitiavanao ny fiainana
Mitsikia, io no lakile mety amin'ny fonon'ny fon'ny olon-drehetra. - Anthony J. D'Angelo
Tazomy hatrany ny tsikinao. Izay no anazavako ny fiainako lava. - Jeanne Calment
Ny tsikitsiky no mijanona ho fanomezana lafo indrindra azoko omena an'iza na iza kanefa ny heriny dia afaka mandresy fanjakana. - Og Mandino
Mizarà amin'izao tontolo izao ny tsikyo. Mariky ny fisakaizana sy ny fandriam-pahalemana izany. - Christie Brinkley
Isaky ny mitsiky olona ianao, dia hetsika fitiavana, fanomezana ho an'io olona io, zavatra tsara tarehy. - Reny Teresa
Tsiky sy angovo tsara. Hoentiny lavitra lavitra noho ny fananana ara-nofo rehetra ianao. - Caroline Ghosn
Tsiky tsotra. Izany no fanombohana ny fanokafana ny fonao sy ny fangorahana ny hafa. - Dalai Lama
Ny sandan'ny tsiky… Tsy mandany vola akory izy io fa mamorona be. Mampanankarena ireo izay mandray, nefa tsy mampahantra an'ireo manome. Mitranga amin'ny flash izany ary ny fahatsiarovana azy indraindray maharitra mandrakizay. - Dale Carnegie
Io no zavatra tsotra indrindra izay hamokatra tsiky lehibe indrindra hatrany. - Anthony T. Hincks
Rehefa mitsiky ianao ary mamolavola aura momba ny hafanana, hatsaram-panahy ary fisakaizana, dia hisarika ny hafanana, ny hatsaram-panahy ary ny fitiavana namana. Ho sambatra anao ny olona faly. - Joel Osteen
Ny tsiky no fitenin'ny fitiavana. - David Hare
Ny tsiky iray monja dia mampitombo ny hatsaran'ny izao tontolo izao. - Sri Chinmoy
Na aiza na aiza alehanao dia makà tsiky miaraka aminao. - Sasha Azevedo
Mitsikia avy ao am-ponao tsy misy tsara tarehy kokoa noho ny vehivavy faly amin'ny tenany. - Kubra Sait
Miverina mijery, ary mitsikia ireo loza mety hitranga taloha. - Walter Scott
Tsy misy zava-dehibe kokoa ny fitafianao noho ny tsiky. - Connie Stevens
zavatra mba hilalao, rehefa ny noloahany
Indraindray ny fifalianao no loharanon'ny tsikinao, fa indraindray ny fitsikinao dia mety ho loharanon'ny fifalianao. - Thich Nhat Hanh
Tsy ho fantatsika velively ny soa rehetra azon'ny tsiky tsotra atao. - Reny Teresa
Rehefa mitsiky amin'ny olon-tsy fantatra ianao dia efa misy angovo mivoaka iray minitra. Tonga mpanome ianao. - Eckhart Tolle
Ny tsikitsiky mafana dia ny fiteny manerantany momba ny hatsaram-panahy. - William Arthur Ward
Manantena aho fa ireto andinin-teny ireto dia nampitsiky anao. Rehefa dinihina tokoa, tsy dia misy toe-javatra maro izay tsy azo hatsaraina amin'ny tsiky.
Ary ny tsiky dia manjary mifindra, ka ny fitsikiana dia mahatonga ny hafa hitsiky koa. Raha tsy afaka mitsiky olona iray ianao dia alefaso any aminy ireto teny nalaina ireto ary asio tsiky eo amin'ny tarehin'izy ireo amin'izany.
Ny tsikitsiky marina sy mafana dia afaka manazava ny andron'ny olona iray, manentana ny fanahin'izy ireo hanao zavatra, na mampahatsiahy azy ireo fa izao tontolo izao dia tsy toerana maizina, fa feno hazavana sy fitiavana.
Ka omeo tsiky ary aparitaho ny fifaliana amin'izao tontolo izao amin'izay alehanao.
aiza no misy ity resaka mandeha ity
nanimba ny fiainako aho izao inona
dia mpirahalahy sy mpirahalahy lahy
Andre ilay ady lehibe goavambe 2018
ny fomba hanampiana olona hiatrika fisarahana
ny fomba hamelomana indray ny fifandraisana taloha